ရေစက်လေးတွေမျက်နှာပေါ်မှာ ရှိနေသလို အေးမြမှုကိုပေးနိုင်မယ့် Hydra-Mist Set & Refresh Powder! | CosmeticMyanmar
Home » Article » ရေစက်လေးတွေမျက်နှာပေါ်မှာ ရှိနေသလို အေးမြမှုကိုပေးနိုင်မယ့် Hydra-Mist Set & Refresh Powder!
ရာသီစက်ဝန်းတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ မကြာမီမှာ ပူပြင်းလှတဲ့ နွေရာသီစက်ဝိုင်းအတွင်းသို့ရောက်ရှိတော့မှာနော်။ ရာသီဥတုကလည်းပူ မိတ်ကပ်လိမ်းထားတာကလည်းထူတော့ ချွေးတွေပြန်ပြီး သက်တောင့်သက်သာမရှိသလို ခံစားလာရပြီပေါ့။ ရာသီဥတုကပူလို့ ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် ချည်ထည်လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီး ဝတ်လို့ရပေမဲ့ မျက်နှာအတွက်အေးမြစေမယ့်ပစ္စည်းလေးများမရှိဘူးလားဆိုပြီး တွေးစရာရှိပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ မျက်နှာလေးကိုအေးမြစေပြီး ပေါ့ပါးလန်းဆန်းတဲ့ အသားအရေလေးကို ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် BECCA ရဲ့ Hydra-Mist Set & Refresh Powder လေးရှိနေပါပြီ။
ဒီ Powder လေးဟာ Weightless powder အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အပြင် အသုံးပြုပြီးနောက်မှာ 360 effect မလိုလောက်အောင် ချောမွတ်တဲ့ အသားအရေလေးကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ 50% water နဲ့ Glycerin တို့ကို ပေါင်းစပ်ဖော်ထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အသုံးပြုတဲ့အခါ အေးမြမှုကိုခံစားရမှာအသေအချာပါပဲ။ Mist sensation ကို အပြည့်အဝခံစားရအောင် ဖော်စပ်ထားပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအနာအဆာလေးများကို မှေးမှိန်စေပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာအချိန်လေးမှာ လန်းဆန်းတဲ့ Look လေးမျိုးရယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးဖို့တော့လိုမယ်နော်။ ထုတ်ပိုးမှုပုံစံလေးကလည်း သယ်ယူရလွယ်ကူအောင် ဖန်တီးထားတာကြောင့် ဘယ်သွားသွား အလွယ်တကူ သယ်ယူသွားလို့ရတာပေါ့။ T Zone တွေမှာ အဆီပြန်တတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ Matte look လေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် အထူးသဖြင့် T-Zone တွေမှာ ထပ်လောင်းအသုံးပြုပေးဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ Powder လေးအေးမြနေစေဖို့ရန်အတွက် အသုံးပြုပြီးတိုင်း အဖုံးကို သေချာပြန်ပိတ်ဖို့တော့လိုမယ်နော်။
Image Source: www.beccacosmetics.com
Anastasia Beverly Hills ရဲ့ အလန်းစား Amrezy Highlighter!